ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » "Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်" (4 ပုဒ်မ 1) ၏ရာသီ2အတွင်းပိုင်း
Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် အဆိုပါသတ်မှတ်ချက်အပေါ်ဒါရိုက်တာဖြစ်သူ Scott Winant (© 2019 Warner Bros. Entertainment က Inc ကို All Rights Reserved ။ )
အခုထက်ကြီးမြတ်ရုပ်မြင်သံကြားတစ်ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ဖို့ပိုပြီးစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အချိန်ရှိခဲ့သည်ဘယ်တော့မှရဲ့။ ထိုအများ၏ရာသီသစ် Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်, Hulu အပေါ်ပြီးခဲ့သည့်လကပြသဖို့သောကြောင့်သည်အဘယ်ကြောင့်အဘို့အပြကွက်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစီးရီးက၎င်း၏ဆယ်ကျော်သက်စုံထောက်အထက်တန်းကျောင်းများနှင့်ကောလိပ်ကျောင်းများတွင်နက်နဲသောအရာဖြေရှင်းရေးနဲ့အတူနန်စီ Drew အပေါ်တစ်ဦးအဆိုးမြင်အန္တရာယ်အပြောင်းအလဲအဖြစ်က၎င်း၏စတင်ကတည်းကရှည်လျားသောလမ်းလာခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါစီးရီး '' လက်ရှိစတုတ္ထရာသီပြပွဲရဲ့ဖန်တီးသူ, ထုတ်လုပ်သူ-စာရေးဆရာရော့သောမတ်စ်နှင့်အတူလိမ္မာပါးနပ်, စာတတ်မြောက်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတဦးတည်းအပေါငျးအသငျးမြား၏အမျိုးအစားနှင့်အတူ၎င်း၏အမှောင်နှင့်အာဏာအရှိဆုံးမှာဂန္ထဝင်ရုပ်ရှင်အဆိုးမြင်အန္တရာယ်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျသေးရာသီ4မြင်ကြပြီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်တို့ကိုငါ ASAP ကစောင့်ကြည့်ဖို့အကြံပြုလိုပါတယ်။ ထိုသို့လုယူသောသူ-အခမဲ့ရဲ့သတ်မှတ်မထားဘူးသောရာသီအကြောင်းကိုဘာမှဖတ်နေရှောင်ကြဉ်ပါ။ (စံချိန်တင်အဘို့, ဤဆောင်းပါးတွင်မပါအဓိကဖျက်လိုဖျက်ဆီးပါရှိသည်.)
Veronica (Kristen Bell ကို), အဖွင့်ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့အစမှာသူမ၏နောက်ခံစကားပြောသံများနဲ့ဇာတ်ကြောင်းအတွက်ကြည့်ရှုသူများကသတိပေးလို့ရာသီ4ဂိမ်း changer ဆိုရန်, သို့သော်ဇာတ်ကောင်တွေနဲ့စီးရီးကိုယ်တိုင်ကနှစ်ဦးစလုံးအတှကျ "လုယူသောသူ" အဖြစ်ရေတွက်မထားဘူး အရာအားလုံးကိုလက်ရှိလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ဖြေရှင်းနိုင်သည်အချိန်အားဖြင့်ကောင်းစွာအဆုံးသတ်မည်မဟုတ်။ ဒါကလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်နှစ်ပတ်လည်နှင့်ကြိုတင်ခန့်မှန်းတွက်ဆ raucous နွေဦးချိုးစဉ်အတွင်း Neptune ၏ကမ်းခြေမြို့,, CA (ပြပွဲရဲ့စိတ်ကူးယဉ် setting ကို) တွင်ဗုံးပေါက်ကွဲမှုတစ်ခုစီးရီးကိုဗဟိုပြု။ ပထမဦးဆုံးအဗုံးဖောက်ခွဲမှုတစ်ဦးအနိမ့်ဘတ်ဂျက်မိုတယ်မှာ, တချို့တရားမျှတ, ရွေ့လျားမှုသို့သံသယ, ကို double-လက်ဝါးကပ်တိုင်, လက်စားချေအခြေအနေတွေနှင့်အပြစ်စွပ်စွဲချက်တစ်ခုစီးရီးအများဆုံးမဟုတ်သတ်မှတ်။ (သက်တမ်းကြာအမျှ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် လူကြိုက်များသောအဖြစ်လူသိများပရိသတ်တွေ, "marshmallows" ပြီးသားသတိထားမိကြသည်, Neptune တစ်ဦး "ဟုလူလတ်တန်းစားမပါဘဲမြို့," နှင့်ကြပါပြီကြားရှိလူတန်းစားတင်းမာမှုများသည်နှင့်အစဉ်မပြတ်ရုံမျက်နှာပြင်အောက်တကျီကျီခဲ့ကြရာ,-ကြည်ပြာပန်းရှိသည်, ပြုတ်ဖို့ခြိမ်းခြောက် အဆိုပါဗုံးပေါက်ကွဲမှုများ၏နိုးထအတွက်စိုးရိမ်ဖွယ်ကျော်။ )
ရာသီအစအက္ခရာစီးရီး '' အများကြီး-ချစ်ရသူသွန်း၏လက်ရှိဘဝအပေါ်ပရိသတ်တွေ update လုပ်ဖို့ဆောင်ရွက်ပါသည်။ သူ၏ရလဒ်အဖြစ်ကျန်းမာရေးပြဿနာများရှိသည်ဖို့ဆက်လက်ကတည်းကသူမ၏လယ်ပိုင်း 30s အတွက် Veronica, ယခုကြံနှင့်အတူသွားလာသောသူ၏အပုဂ္ဂလိကစုံထောက်အေဂျင်စီ Keith အဘို့အကောင်းတစ်ဦးအရာအတွက်သူမ၏ဖခင် Keith (Enrico Colantoni) နဲ့ပါတနာတစ်ဖြစ်လာသည် သူ 2014 ၌ခံကားမတော်တဆမှု Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် ရုပ်ရှင်။ သူဟာရေတပ်ထောက်လှမ်းရေးအရာရှိချုပ်အဖြစ်သူ၏အနေအထားအတွက်ပင်လယ်ရပ်ခြားမဟုတ်ပါဘူးသည့်အခါ Veronica နှင့်သူမ၏ရှည်လျားအချိန်ရည်းစား Logan Echolls (Jason Dohring) အပေါ်ကိုချွတ်-and ကမ်းခြေတခုတခုအပေါ်မှာတိုက်ခန်းမျှဝေနေကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သော Logan ရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေ, နှစ်ရှည်ကြွယ်ဝသော frat ကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည်တိရစ္ဆာန်အဒစ်ခ် Casablanca (ရိုင်ယန် Hansen) ကဲ့သို့သောအခြားသွန်းအကြိုက်ဆုံး, Veronica ရဲ့ရင်းနှီးသောမိတ်ဆွေ Wallace စမုန်နက် (ပါစီ Daggs III ကို), biker ဂိုဏ်းခေါင်းဆောင်ကိုဧလိ "ပိုး" Navarro (Francis က Capra); နှင့်ဖြတ်-rate ကိုအားလုံးပွဲအတွက်ထားရှေ့နေ, ပြည်သူ့နောက်ခံလူများနှင့်အင်္ဂါဂြိုဟ်စုံစမ်းစစ်ဆေး၏ရံဖန်ရံခါ client ကို, Cliff မက်ကော်မစ် (Daran Norris က) ။
ပီဇာဖြန့်ဝေကောင်လေးတစ်ယောက်နှင့်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုသီအိုရီ Penn Epner Over-အသက်ကြီးသော Patton Oswald အပါအဝင်အချို့ဦးပထမဦးဆုံးနှုန်းမှာဧည့်သည်ကြယ်များဖြစ်ကြသည်သူတို့ကိုချိတ်တွဲ; ဒစ်ခ်ရဲ့ sleazy အိမ်ခြံမြေသူဌေးဖခင် "နဲ့ Big Dick" Casablanca (ဒါဝိဒ်သည် Starzyk) အတွက်တစ်ဦး fixer အဖြစ်အလုပ်လုပ်သောသူဟောင်း con Clyde Pickett အဖြစ် JK Simmons; နှင့်နီကိုးလ်မော်လီက "ရဲဘော် Quacks," နွေဦးအနိုင်အထက်များအတွက်အကြိုက်ဆုံးရေလောင်းပေါက်လေး၏ပိုင်ရှင်အဖြစ် Kirby Howell-Baptiste ။
ဖြစ်ကောင်းထိုကဲ့သို့သောကဲ့သို့သောပြင်းထန်စွာကောင်းချီးစီးရီးလူသိများ Beats two-အချိန်သူဟာ Emmy-အနိုင်ရထုတ်လုပ်သူ-ညွှန်ကြားရေးမှူးဖြစ်သူ Scott Winant, thirtysomething, အကြှနျုပျ၏ဒီတော့-ခေါ်ဘဝ, ဆိုးဝါးစွာချိုးဖောက်ခြင်း, စစ်မှန်သောသွေးနှင့် Californicationမှတစ်ဦးမျက်နှာသစ်ဖြစ်ပါသည် Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ်, ဒါပေမဲ့သူနှစ်ဦးကိုရာသီ4ဖြစ်စဉ်များ, "Streak ဆုံးရှုံး" နှင့်ရာသီဇာတျသိမျးနှင့်အတူအပ်နှင်းခဲ့ပါတယ် "နှစ်, တိုက်ကြီး, သွေးထွက်သံယို။ " သူကလုပ်ခဲ့တယ်, သို့သော်, သူ့ယခင်တာဝန်ကျတဦးအလားတူအချို့သောပုံပြင် element တွေကိုရှာပါ။
"မတူပဲမဟုတ် ဆိုးဝါးစွာချိုးဖောက်ခြင်း, ဟာသ, ဒရာမာ, နှင့်အကြမ်းဖက်မှုရုတ်တရက်လုပ်ရပ်များအကြားတစ်ဦးနူးညံ့သိမ်မွေ့သောချိန်ခွင်လျှာရှိ၏ "Winant ကဆိုသည်။ "Kristen Bell ကိုနိုင်အောင်ကဤကွဲပြားခြားနားသောအဆင်းအရောင်အားလုံးအတူတကွ fit သူမ၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ပဲညာဖက်သေံရှာတွေ့ထားတဲ့ uncanny နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါဖြစ်စဉ်များ tonally မှန်ကန်သောခံစားခဲ့ရသေချာစေရန်အခြားသရုပ်ဆောင်တွေ directing သောအခါငါသူမ၏မှငါ့ခဲကိုယူ။ ဒါ့အပြင်ပြပွဲင်း၏မတ်-လိမ္မာပါးနပ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေးအတွက်နှင့်၎င်း၏အနုစိတ်ပုံပြင်ပြောရာမှာအတွက်နှစ်ဦးစလုံးဟာမွေးရာပါရစ်သမ်ရှိပါတယ်။ အဲဒီဒြပ်စင်ထောက်ခံတဲ့အမြင်အာရုံစတိုင်ကိုဖန်တီးရန်ခဲယဉ်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်မတစ်ဦးချင်းစီမင်းသားရဲ့ပြပွဲအပေါ်သမိုင်းနှင့်မည်သို့သူတို့ရဲ့ဇာတ်ကောင် Veronica ထိခိုက်အကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူပျော်မွေ့ခဲ့သည်။ တစ်ဦးမျက်နှာသစ်အဖြစ်, ငါ့ရည်မှန်းချက်အတိတ်လေးစားရန်, ဒါပေမယ့်လည်းကျနော်စီးရီးသို့ပထမဦးဆုံးအချိန်ကြည့်ရှုသူတစ်ဦးအဆင်ပြေလမ်းပေးလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းအမြင်တစ်ခုအရာဝတ္ထုအမှတ်ရောက်စေဖို့ပဲ။ "
သူကငါ့ကိုမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းလုပ်အမျှ Winant ယင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ပိုပြီးကျေနပ်ပါပြီနိုင်ဘူး Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် သွန်းနှင့်လေယာဉ်အမှုထမ်း။ "ပထမဦးစွာ Kristen တစ်အံ့ဩဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူကရှင်းပြသည်။ "အစဉ်အမြဲငါနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်အရှိဆုံးပါရမီရှင်သရုပ်ဆောင်တွေထဲကတစ်ခုသော်လည်းအမှန်တကယ်ကြီးမြတ်လူသားမသာ။ အစုံတွင်သူမကလုံးဝအာရုံစူးစိုက်ခြင်းနှင့်သော့ခတ်-in ကိုသည်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အလုပ်, ဒါပေမယ့်လည်းသူမ၏န်းကျင်ဘွေတရာနဲ့အခြားအမှုအရာမှမသာ။ ငါ set ကိုအပေါ်တစ်ဦး Co-ညွှန်ကြားရေးမှူးများကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းထဲမှာ Kristen Bell ကိုရှိခြင်းကြောင်းရိုက်ကူးစဉ်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကပြောသည်ပါတယ်။ သူမသည်အံ့သြလောက်အောင်အလိုလိုသိရဲ့နဲ့လူတိုင်းရဲ့အလုပ်သတိထားဖြစ်ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမဘယ်လောက်ပဲရှုပ်ထွေးနေတဲ့ရိုက်ချက်သူမကချက်ချင်းလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နှင့်အလွန်ခက်ခဲအချိန်လေးလွယ်ကူအောင်နိုင်ဘူး။ ထိုအ Ricco [Colantoni] တစ်မင်းသားဖြစ်ပါတယ်။ သူလည်းတစ်ဦးတောက်ပသရုပ်ဆောင်ဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ Kristen လိုပဲကြင်နာပြီးရက်ရက်ရောရောတစ်အံ့သြဖွယ်လူတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ မျဉ်းကိုချ, ဘုတ်အဖွဲ့ကိုဖြတ်ပြီး, တစ်ခုလုံးသွန်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်တစ်မွေ့လျော်ခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါသင်္ဘောသားမိသားစုများကဲ့သို့ခံစားခဲ့ရငါ့ကိုကြိုဆိုခံစားရဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ တိုင်းဦးစီးဌာနငါ့အလိုရှိသမျှစိတ်ကူးများအဘို့စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်စိတ်အားထက်သန်ပြငါ့ကိုငါသည်ဤသည်အလွန်ထူးခြားသောပြပွဲများအတွက်အထူးအရာတစ်ခုခုကိုဖန်တီးဖို့လိုအပ်တဲ့ tools တွေကိုအားပေးတော်မူ၏။ "
ဒါဟာသူ့နှစ်ခုဖြစ်စဉ်များသေံပိုမိုကွဲပြားခြားနားသောမဖွစျနိုငျကွောငျးဒါရိုက်တာအဖြစ် Winant ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ဦးသေတမ်းစာပါပဲ။ "Streak ဆုံးရှုံး" ဟုအဆိုပါရှစ်ဇာတ်လမ်းတွဲရာသီ၏ပဉ္စမဇာတ်လမ်းတွဲ, အခြေခံအားဖြင့်တစ်ဦး "သတ္တမ-ဝင်ထွက်ခြင်းလမ်းပိုင်း" ဟုအဆိုပါအမျိုးမျိုးသောကြံစည်မှုခြိမ်းခြောက်မှုများနှင့်သံသယရှိသူ summation တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ၏ရာသီရဲ့ညီမျှသည်, အခြားဖြစ်စဉ်များထက်အတော်လေးပေါ့ပါးသေံနှင့်အတူ ဒါကြောင့်သိသိသာသာတင်းမာမှု၎င်း၏ဝေစုမပေမယ့်။ တကယ်တော့သူကနောက်ကျောမှနောက်ကျောနှစ်ခုအထူးသဖြင့်ရယ်စရာကာတွန်းမြင်ကွင်းများရှိပါတယ်။ Veronica ပုဂ္ဂလိကစုံထောက်ကြောင်းပြောပြတဲ့အခါပထမဦးဆုံး, Veronica ကတတ်၏အဖြစ်, "မိမိတို့ yuppie မိတ်ဆွေများက။ " သူ၏ဇနီးနှင့်ကလေးနဲ့အတူ Wallace ၏အိမ်တော်မှာပါတီတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့် (တစ်ဦးဧည့်သည်သူမ၏အလုပ်အကိုင်ပြောပြတယ် "အဟောင်းချာလီချန်းရုပ်ရှင်တွေ။ " ) ထို sequence ကို Veronica နှင့်နီကိုးလ်ဟာစမုန်နက် '' ရေချိုးခန်းအချို့အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ reefer vaping နဲ့ interlude အားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ သူနှင့်ကိုလိုကျနာသောကိုပိုမိုပြင်းထန်သောအချိန်လေးတူသောပေါ့ပါးအချိန်လေးနှင့်အတူအညီအမျှအဆင်ပြေသလိုခံစားရတယ်လျှင်ငါ Winant မေးတယ်။ "ငါသည် do အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာထူးထူးခြားခြားရောင်စဉ်နှစ်ခုလုံးကြီးစွန်းနှင့်အတူသက်သာခံစားရနှင့်တန်းတူစွမ်းအင်နှင့်အတူထိုသူအပေါင်းတို့ကိုချဉ်းကပ် "လို့သူကပြောတယ်။ "အဆုံးစွန်ကိုငါ့ရည်မှန်းချက်နေပါစေသူ့ရဲ့လေသံတိုင်းအခိုက်အဖို့ရိုးရိုးသားသားအမှန်တရားကိုရှာဖွေဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ "
ပြင်းထန်သော, Winant ရဲ့ဒုတိယဇာတ်လမ်းပိုင်းကိုအဆိုပါဖျောပွဇာတျသိမျး၏စကားပြောသော "နှစ်, တိုက်ကြီး, သွေးထွက်သံယို," ဝေးနေဖြင့်ရာသီ၏အမှောင်ဇာတ်လမ်းတွဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာ, ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့အဖွင့်ပွဲမြင်ကွင်းက၎င်း၏အကြမ်းဖက်မှုများအတွက်တုန်လှုပ်ဖွယ်များနှင့်ကဗြာဆနျတရားမြှတတဲ့ကြင်နာအဖြစ်သေး grimly ထညျ့နှစ်ဦးစလုံးဖွစျဖို့စီမံခန့်ခွဲတဲ့လူသတ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ငါမြင်ကွင်းတစ်ခု၏ပထမဦးဆုံးရာသီကနေတစ်ဦးဇာတ်လမ်းတွဲအတွက်အလားတူမြင်ကွင်းတစ်ခုငါ့ကိုသတိပေးကြောင်း Winant ပြောသည် တဖက် သူက "ဘယ်သူဘာဘာ Shaves?" ဟုခေါ်တွင်ဒါရိုက်တာလည်းကြောက်မက်ဖွယ်နှင့်ရယ်စရာနှစ်ဦးစလုံးခဲ့တဲ့သတ်ဖြတ်မှုခဲ့, နှင့် Coen ညီအစ်ကိုများနှင့် Quentin Tarantino နှင့်အတူမှောင်မိုက်ဟာသပရိသတ်တွေတွဲဖက်အမျိုးအစားကိုမှနှစ်ဦးစလုံးမြင်ကွင်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရာ။ "ပထမဦးစွာငါ Coen ညီအစျကိုမြားနှငျ့ Tarantino နှင့်ဆက်စပ်ခံရဖို့ချော့မော့တယ်" ဟုသူက "တုန့်ပြန်နှင့်ဟုတ်တယ်, ငါသူတို့အားအမျိုးအစားပာများအတွက်အသွင်ရှိခံစားရပါဘူး။ ငါရှုပ်ထွေးပြီးမသိမသာကွဲပြားနှစ်ဦးစလုံးကြောင်းကိုပစ္စည်းနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကိုချစ်။ ဒါဟာငါ့ကိုစိတ်ဓါတ်များနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားမှုသိရှိစေရန်ရုပ်ရှင်နည်းစနစ်ကိုအသုံးပြုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဆိုပါ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် sequence ကို၎င်း၏စက်ဆုတ်ဘွယ်ဖြစ်သောအကြောင်းအရာရှိနေသော်လည်းပြင်သစ် FARC ကဲ့သို့ငါ့ကိုမှဖတ်ပါ။ ကွဲပြားခြားနားသောတွန်းအားတွေနဲ့အကွိမျမြားစှာဇာတ်ကောင်အားလုံးအတူတူပင်အာကာသအတွင်းတစ်ချိန်တည်းမှာတိုက်မိ။ သင်အကြမ်းဖက်မှုများရိုးရိုးသားသားပုံဖော်ခံရဖို့လိုခငျြသောကွောငျ့ဒါဟာ tonal စိန်ခေါ်မှုရဲ့, ဒါပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, ကတစ်ဖွဲ့လုံးကပြပွဲသို့ fit ရမည်ဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကား esthetic ရွေးချယ်မှုမဟုတ်ရင်ကြည့်ရှုသူ၏အတွေ့အကြုံထဲကတွန်းပါလိမ့်မည်, အရေးကြီးသောဖြစ်ကြပြီးမှန်မှန်ကန်ကန်ကိုင်တွယ်ရမည်ဖြစ်သည်။ "
ကြောင်းဖွင့်လှစ် sequence ကိုကဲ့သို့မှောင်မိုက်သည်ဇာတ်လမ်းတွဲရဲ့တတိယလုပ်ရပ်သိသိသာသာပင်လေးလံဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီနောက်ဆုံးမြင်ကွင်းများချဉ်းကပ်ရကြ၏ဘယ်လောက်ခက်ခဲ Winant မေးတယ်။ "ငါကဒီ sequence ကို၏အရေးပါမှုနှင့်မည်သို့ခက်ခဲအချို့ပရိတ်သတ်များကိုစုပ်ယူအပ်သည်ဖြစ်စေခြင်းငှါနားလည်သဘောပေါက်" ဟုသူကဖြေသည်။ "ကျွန်မအဲဒါကိုကျွန်မအနေနဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ပျက်စရာအခိုက်လိမ့်မည်ကိုသိသောအရာကို belaboring မပါဘဲခံထိုက်အလေးချိန်ပေးရကျွန်မရဲ့အကောင်းဆုံးကိုပြု၏။ နောက်တကြိမ်, ငါသည်ဤဧရာမပုံပြင်စည်းချက်မှတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုသယ်ဆောင်ရန် Kristen ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုနှင့်ခိုင်ခံ့သောအရေးအသားသို့ကိုထောက်။ "
အားလုံးအားလုံးအတွက်, Winant အလုပ်လုပ်တွေ့ရှိခဲ့ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကျေနပ်စရာအတွေ့အကြုံကိုဖြစ်။ " အကယ်. Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် ပဉ်စမရာသီပြန်ကြွလာကျွန်မရဲ့အချိန်ဇယားကို manipulate က၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ် humanly ဖြစ်နိုင်သောတိုင်းကြိုးစားအားထုတ်မှုစေမယ်လို့ "လို့သူကကဆိုသည်။ " ဤကဲ့သို့သောရှိုးများရှားပါးဖြစ်ကြပြီးငါအခွင့်ထူးများနှင့်တစ်ဦးဂုဏ်အသရေက၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခြင်းစဉ်းစားပါ။ "
FOR-တစ်ဦးက FOR-A, မူကွဲစနစ်များ, ဂရေဟမ်ချပ်မန်း Prmoted toEditor Hulu ရော့သောမတ်စ် လှံ & Arrows တီဗီနည်းပညာ မူကွဲစနစ်များ Veronica အင်္ဂါဂြိုဟ် ဖြစ်တဲ့ Warner Brothers 2019-08-16
ယခင်: ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်း ROOM တွင် International
နောက်တစ်ခု: ဂရပ်ဖစ်ဒီဇိုင်း / ဒစ်ဂျစ်တယ်ထုတ်လုပ်မှု